Oge: 2020-08-27 Hits: 25
Mee 1, Daybọchị Ndị Ọrụ Mba ,wa, na-echeta ọgụ dị iche iche ndị mmadụ na-arụ n’ụwa nile, ma bụrụ ndị a nabatara n’ọtụtụ mba. United States of Canada na Canada so na ndị ọzọ. Nke a n’agbanyeghi na ezumike ahụ bidoro na 1880s na USA, jikọtara agha maka ụbọchị elekere asatọ, na ndị Chicago anarchists.
Ọgụ nke ụbọchị awa asatọ malitere na 1860s. Na 1884, Federation of Organized Trades and Labour Unions of the United States and Canada, haziri na 1881 (ma gbanwee aha ya na 1886 na American Federation of Labour) wepụtara mkpebi nke gosipụtara na "awa asatọ ga-abụ ọrụ ụbọchị iwu site na na mgbe May 1, 1886 gasịrị, na anyị kwadoro ndị ọrụ na-arụ ọrụ na mpaghara a niile ka ha wee nye iwu ha ka o kwekọọ na mkpebi a. N'afọ sochirinụ Federation kwughachiri nkwupụta na usoro awa asatọ ga-amalite na May 1, 1886. Ebe a manyere ndị ọrụ ịrụ ọrụ awa iri, iri na abụọ, na iri na anọ kwa ụbọchị, nkwado maka ije awa asatọ na-eto ngwa ngwa. . N'ime ọnwa tupu Mee 1, 1886, ọtụtụ puku ndị ọrụ, ndị a haziri ahazi na ndị a na-ahazighị ahazi, ndị otu nzukọ Knights of Labour na nke gọọmentị, abanyela na ọgụ ahụ. Chicago bụ isi ebe nsogbu na-adị maka ụbọchị dị mkpirikpi. Ndi anarchist bu ndi mbu nke Central Labour Union of Chicago, nke gunyere ndi oru 22 na 1886, otu n’ime ha bu ndi asaa n’ime obodo.
N'oge ọrụ ụgbọ okporo ígwè nke 1877, ndị uwe ojii na ndị agha United States wakporo ndị ọrụ ike. Ejiri ụdị ọrụ gọọmentị kwado ụdị iyi ọha egwu iji lụso ọgụ were awa asatọ ọgụ. Ndị uwe ojii na ndị nche mba wee baa ụba ma nata ndị agha ọhụụ na ndị dị ike nke ndị isi azụmaahịa mpaghara na-akwụ ụgwọ. 'Slọ ahịa azụmahịa nke Chicago zụrụ otu egbe $ 2000 maka Illinois National Guard iji mee ihe megide ndị na-eti ihe. Ka o sina dị, ka ọ na-erule Mee 1st, ngagharị ahụ enwetalarị uru maka ọtụtụ ndị ọrụ Chicago. Mana na Mee 3, 1886, ndị uwe ojii gbara ọkụ n’etiti igwe mmadụ na-akụ ihe na ụlọ ọrụ McCormick Harvester Machine, wee gbuo opekata mpe otu onye na-eti ihe, merụọ mmadụ ise ma ọ bụ isii ahụ nnukwu, ma merụọ ọnụọgụ a na-amabeghị aha. Ndị na-emegide ọchịchị kpọrọ oku maka nzukọ nzukọ Osote ụbọchị na Haymarket square ime mkpesa na obi ọjọọ a.
Nzukọ ahụ gara n’ihu n’enweghị nsogbu ọ bụla, ka ọ na-erule oge ọkà okwu ikpeazụ nọrọ n’elu ikpo okwu, nnọkọ mmiri ozuzo amalitelarị ịkpa, na-echekwa nanị ihe dị ka narị mmadụ abụọ. Ọ bụ mgbe ahụ onye uwe ojii kọlụm nke 180 ndị mmadụ zọrọ njem ije n'ime square ma nye iwu ka nzukọ ahụ gbasasịa. Na ngwụcha nzukọ ahụ tụbara ndị uwe ojii otu bọmbụ, gbuo otu ntabi anya, mmadụ isii ọzọ nwụrụ mgbe e mesịrị. Ihe dị ka ndị uwe ojii iri asaa merụrụ ahụ. Ndị uwe ojii zaghachiri site n'ịgba egbe n'ime igwe mmadụ ahụ. Otutu ndi mmadu ndi meruru aru ma obu ndi nwuru site na ndi uwe ojii enweghi ike mata. Agbanyeghị na amabeghị onye tụrụ bọmbụ ahụ, ejiri ihe ahụ mere ihe ngọpụ iji wakpo ndị ọgba aghara na ndị ọrụ ọrụ n'ozuzu ha. Ndị uwe ojii wakporo ụlọ na ọfịs ndị a na-enyo enyo na ha na-emebiga ihe ókè, ma nwụchiri ọtụtụ narị mmadụ n'enweghị ebubo. Ọchịchị ndị uwe ojii jidere Chicago. N’ịdebe “mwakpo” na mpaghara ndị ọrụ, ndị uwe ojii chịkọtara ndị niile na-agba ọchịchị mgba okpuru na ndị ọhaneze ndị ọzọ. “Mee mwakpo ahụ na mbụ wee chọọ iwu mgbe e mesịrị!” nyere onye ọka iwu steeti ahụ ndụmọdụ n’ihu ọha.
A kpagburu ndị na-emegide Anarchist ọkachasị, na-ebo mmadụ asatọ n'ime ndị kacha arụ ọrụ na Chicago ebubo ịgba izu igbu mmadụ n'ihe metụtara ogbunigwe Haymarket. Courtlọ ikpe kangaroo mara mmadụ asatọ ahụ ikpe, n'agbanyeghị enweghị akaebe na-ejikọ onye ọ bụla n'ime ha na onye na-atụ bọmbụ, ha dịkwa ikpe ịnwụ. Na October 9, 1886, akwụkwọ akụkọ kwa izu Knights of Labour bipụtara na Chicago, ụgbọ alahụ na peeji nke 1 ọkwa na-esonụ:Osote Izu anyị amalitela mbipụta nke ndụ ndị anarchist kpọsara na ngalaba ọzọ. ” Mgbasa ozi ahụ, ụgbọ alaried na peeji nke 14, na-agụ, sị: “Akụkọ banyere ndị ọgba aghara, site n’onwe ha kọrọ; Parsons, Ndị nledo, Fielden, Schwab, Fischer, Lingg, Engle, Neebe. Nanị ezi akụkọ ihe mere eme nke ndị ikom na-azọrọ na a mara ha ikpe ọnwụ ịnwụ maka iji ikike ekwupụta okwu efu: Mkpakọrịta ha na Labour, Socialistic and Anarchistic Societies, echiche ha gbasara ebumnuche na ebumnuche nke otu ndị a, yana otu ha si atụ anya imezu ha; nakwa njikọ ha na Chicago Haymarket Affair. Nwoke ọ bụla bụ onye edemede nke akụkọ nke ya, nke ga - apụta naanị na "Knights of Labour" n'oge Osote ọnwa atọ, - nnukwu akwụkwọ ọrụ aka nke United States, akwụkwọ 16-enwe kwa izu, nke nwere akụkọ ọhụụ ọ bụla si mba ọzọ na ụlọ ọrụ nke ụbọchị ahụ, akụkọ, ihe ngosi ụlọ, wdg. Akwụkwọ nkwado nke ndị otu na-achịkwa ma na-achịkwa. nke Knights nke Labour, ma nye ya obere ego nke $ 1.00 kwa afọ. Gbasoo niile nkwukọrịta na Knights nke Labour Publishing Company, 163 Washington St., Chicago, Ọrịa. ” Mgbe emechara akwụkwọ akụkọ a na akwụkwọ Mkpu akwụkwọ bipụtara akụkọ banyere ụmụ nwoke Haymarket.
Albert Parsons, August Ndị nledo, Adolf Fischer na George A kwụgburu Engel na November 11, 1887. Louis Lingg gburu onwe ya n’ụlọ mkpọrọ. Ndị ọchịchị nyefere ozu ndị enyi ahụ maka olili, na otu n'ime usoro olili ozu kachasị ukwuu na akụkọ ntolite Chicago. E mere atụmatụ na ihe dị ka mmadụ 150,000 ruo 500,000 jikọtara ụzọ nke usoro olili ozu ndị Haymarket nwụrụ. E kpughere ihe ncheta nke ndị ikom ahụ gburu egbu na June 25, 1893 na ebe a na-eli ozu Waldheim na Chicago. Ndị fọdụrụ n’ime, Samuel Fielden, Osụgbọ ala Neebe na Michael Schwab, ka emechara gbaghara na 1893.
Na June 26, 1893, gọvanọ Illinois, John Peter Altgeld, wepụtara ozi mgbaghara nke o mere ka o doo anya na ya anaghị enye mgbaghara ahụ n'ihi na o kwenyere na ndị ikom ahụ tara ahụhụ zuru ezu, mana n'ihi na ha dị ọcha na mpụ emere ha ikpe maka ya, na ha na ndị a kwụgidere ụmụ nwoke abụrụla ndị metụtara nchiyo, ndị jury juru na onye ọka ikpe na-enweghị isi. O kwuru na ndị a na-enyo enyo enyoghị ikpe maka na steeti ahụ "achọpụtabeghị onye bụ onye tụbara ogbunigwe ahụ gburu onye uwe ojii ahụ, ihe akaebe egosighi njikọ ọ bụla n'etiti ndị na-azara ọnụ na nwoke tụbara ya."
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na steeti, ndị isi azụmaahịa, ndị isi otu ndị ọrụ, na ndị mgbasa ozi ga-achọ izochi ezi akụkọ banyere May Day. Na ngbali ya ihichapu akụkọ ihe mere eme na mkpa nke Day Day, gọọmentị United States kwupụtara May 1st ka ọ bụrụ "Lawbọchị Iwu", ma nye ndị ọrụ kama Laborbọchị Ndị Ọrụ, Mọnde mbụ nke Septemba - ezumike nke enweghị ihe ọ bụla dị mkpa.
Ka o sina dị, kama ịkwụsịlata ọrụ na ndọrọndọrọ ọchịchị, ihe ndị mere na 1886 na ogbugbu nke ndị ọgba aghara Chicago, ndị na-ekwuchitere ije ụbọchị asatọ ahụ, kpalitere ọtụtụ ọgbọ nke buu. Emma Goldman, onye ntorobịa kwabatara n’oge ahụ, mechara rụtụ aka n’ihe gbasara Haymarket dịka ọmụmụ ya na ndọrọndọrọ ọchịchị. Kama ịla n'iyi, usoro ọgba aghara naanị toro na Haymarket.
Dị ka ndị ọrụ, anyị ga-amata ma na-echeta ụbọchị Mee ọ bụghị naanị maka ihe dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme, kamakwa dị ka oge iji hazie ihe dị mkpa maka ndị ọrụ, ya bụ ndị mmadụ, nke taa.
Previous: Nke a bụ agha na-enweghị anwụrụ ọkụ. Anyị niile bụ ndị ọgụ!
Ọzọ: Ike nke ọchị